Momba anay - Jiangxi Earth Superhard Tools Co., Ltd.
Jiangxi Earth Superhard Tools dia sinoa matihanina kalitao matihanina vita amin'ny orinasa nanamboatra ny vokatray tamin'ny indostrian'ny fananganana sy ny vato nandritra ny am-polony taona maro. Ny tsipika misy anay dia misy ny fitaovana fikolokoloana / famolavolana Diamond sy PCD, Diamond Saw Blades, Core Drill, Grinders amin'ny gorodona, Pads Resin izay be mpampiasa amin'ny famolahana beton, fanomanana eo an-toerana ary fanapahana vy ary koa ny tanimbary vita amin'ny vato.
Ny fitaovana diamondra brazed brazed dia nanatevin-daharana, tsy vitan'ny fanitarana ny karazana entantsika fotsiny, fa avelao koa isika hanosika ny fampianarana vaovao ho an'ny indostrian'ny vy izay ho lasa angovo avo lenta sy avo lenta ary fiarovana ny tontolo iainana & fitsitsiana angovo
Ny toeram-pamokarana lehibe dia mamela antsika hanao fandefasana baiko haingana, ary ny R&D dia miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifanay amin'ny fampisehoana tsara kokoa sy fiainana lava kokoa izay mahasoa ny tetikasa tokana, ankoatry ny taona maro ny kaonty OEM tsy mivadika dia manome vokatra mifanaraka tsara amin'ny marika lehibe rehetra koa izahay fitaovana eny an-tsena.
Manana ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara sy rafitra serivisy ho an'ny mpanjifa tonga lafatra izahay, mba hanomezana ho an'ny mpanjifa alohan'ny varotra mahomby sy avo lenta, amidy sy serivisy aorian'ny fivarotana. Ny vokatra sy serivisinay dia eken'ireo mpanamboatra fanaka fanta-daza maro ary lasa mpamatsy silaka voatendry ho azy ireo. Raha ny fahitan'ny mpivarotra sy ny mpampiasa an'i Sina dia tsy vitan'ny hoe mahazo ny vokatra feno kalitao feno fotsiny izahay, fa hahazo ihany koa ny fanohanana ara-teknika sy feno fitantanana matihanina. Samy hafa tanteraka amin'ny maodely fandraharahana fantsona tokana nentim-paharazana, hamorona rafitra marketing maoderina ho anao izahay, ao anatin'izany ny fampandrosoana ny tsena, ny fitantanana ny varotra, ny fitantanana ny fahafaham-po ny mpanjifa, ny fampiofanana matihanina amin'ny mpiasa, ny fanavaozana ny maodely tombony ary ny rafitra hafa. Miezaka ny tratry ny herinay izahay hanampy anao amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana, hanamafisana ny toeranao ary hanampy anao ho mpandresy amin'ny tsenan'ny faritra.